IKhabhinethi kwelenzukazikeyi yomhlaba – Ubukhosi
Home/ Izindaba/IKhabhinethi kwelenzukazikeyi yomhlaba
UNgqongqoshe uNomvula Mokonyane
UNGQONGQOSHE Wezokuxhumana uNkk uNomvula Mokonyane uveze ukuthi awukho umhlaba ozothathwa ngodli futhi ngaphandle kwesinxephezelo. Ekhuluma esithangamini eKapa izolo ngemuva komhlangano weKhabhinethi, uMokonyane uthe njengoHulumeni bazoqinisekisa ukuthi akukho lapho umhlaba uthathwa khona ngaphandle kwesinxephezelo nathe bazoqinisekisa ukuthi kulandelwa yonke imigudu nomthetho ekusingathweni kwalolu daba.
Lolu daba lo mhlaba lufake itwetwe kwabaMhlophe kangangoba uNgqongqoshe Wezangaphandle e-Australia, uveze ukuthi bazosheshisa izicelo zabalimi abaMhlophe abafuna ukufudukela kuleliya lizwe ngenxa yokwesabela izimpilo zabo kulandela ukuvela kwezindaba ezithi umhlaba uzothathwa ngaphandle kwesinxephezelo.
Uthe nakuba umhlaba uzobuyiselwa kubantu, kepha kubalulekile ukulandela umthetho.
“Kusiphatha kabi okushiwo nguNgqongqoshe wase-Australia mayelana nalolu daba ngoba kukhombisa ukuthi kunokwesabela okukhona. Ngeshwa ngesikhathi ekhipha lesi sitatimende njengeKhabhinethi besisahlangene kwangaba lula ukuba simcacisele kahle ngalo. Sibona kubalulekile ukuthi kulandelwe umthetho kulolu daba ukuze luzosingatheka kahle,” kusho uMokonyane.
Emasontweni ambalwa edlule umholi we-Economic Freedom Fighters (EFF) uMnu uJulius Malema ufake isiphakamiso ePhalamende sokuba kubhekisiswe kahle udaba lo mhlaba, njengoba esiphakamisweni sakhe ekubeke kwacaca ukuthi akungabi nje kuphela ukubuyela komhlaba kubantu kepha kufanele ubuyiselwe ngaphandle kwesinxephezelo.
Lokhu kuholele ekutheni lolu daba lubekwe ezithebeni ePhalamende, nalapho khona amaqembu ezepolitiki evotile kwacaca ukuthi iningi liyavumelana nokuthi umhlaba kufanele ubuyele kubantu ngaphandle kwesinxephezelo.
I-African National Congress (ANC) ivumelane ne-EFF ekutheni umhlaba kufanele ubuyiselwe kubantu ngaphandle kwesinxephezelo. Lokhu kulandela isivumelwano esathathwa yiqembu elibusayo ngesikhathi kunengqungquthela yokukhetha ubuholi ngoZibandlela nyakenye eGoli.
Amanye amaqembu avote ne-EFF ne-ANC kube yi-IFP, i-UDM, iNFP, i-Agang SA, i-AIC ne-APC.
Amaqembu angahambisananga nalesi siphakamiso iDemocratic Alliance (DA), iCongress Of The People (COPE), i-African Christian Democratic Party (ACDP) neFreedom Front Plus (FFP).
Izinhlangano zabalimi i-Agri SA ne-AfriFrorum ziyasichitha isiphakamiso sokuba kuthathwe umhlaba ngaphandle kwesinxephezelo kwazise izona ezizolimala kakhulu nxa lesi siphakamiso singaphasa.